Ọgwụ mgbochi maka meninjaitis - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ọgwụ mgbochi maka meninjaitis
Ọgwụ mgbochi maka meninjaitis bụ nke ọbụla emere iji gbochie ọria ụbụrụ nke Neiserịa meninjaitis. Onwere ụdị dị iche iche nke n’arụ ọrụ ka okwesịrị: A,C, W135 na Y. Ọ na-arụ ọrụ ruo afọ abụọ site na pasent 85 ruo 100. Ọ na-ebelata ịrị elu ya ebe ọdị nnukwu ruo afọ abụọ. A na-eji ntụtụ agbanye ya mmadụ n’ime ahụ.
Mba ụwa n’ahụ maka ahụike bụ Wold Helt Oganaịzeshọn nyere ntụziaka ka akụkụ uwa ndị nwere ya gbalịa n’agba ọgwụ a site na mgbe ruo na mgbe. Ha nyekwara ntuziaka ka ndị bi na mba ọdịghị nnụkwụ gbakwa ọgwụ a. Na mba Afrịka a na-eme mgbalị ịhụ na onye ọbụla dị site n’afọ ndụ nke 1 ruo afo 30 gbara ọgwụ a. Na mba Kanada na Unaịted Steeti, a na agbalị n’agbara onye ọbụla ụdị ọgwụ anọ a. Okwesịkwara ka ndị n’aga Meka maka Haji kwesịrị ịgba ya.
Mgbochi dị nnukwu mkpa. Onye dị ime ga-agbakwa ya. Mgbe Ufọdụ agbasirị ya, ọ na-egosi ọbara ebe agbara ya, ma n’egbukwa mgbu. Naanị otu onye n’ime otu nde mmadụ gbara ya n’egosi ihe ndịọzọ n’esochi.
Emepụtara ọgwụ maka ya nke mbụ n’afọ ndị 1970. Ótú mba ụwa akpọrọ Wọld Helt Ọganaịzeshọn ji ya mee ihe dịka ọgwụ ha ga-eji eme ihe nke kasị mkpa maka nlekọta ahụike. Ọnụegọ maka onye chọrọ ịzụ ọtụtụ bụ dọla 3.23 na 10.77 maka otu n’afọ 2014. Na mba Unaịted Steeti ọnụego ya bụ site na dọla 100 na 200 maka otu.
↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 "Meningococcal vaccines: WHO position paper" (PDF). Weekly epidemiological record. 47 (86): 521-540. Nov 2011. PMID 22128384.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ọgwụ_mgbochi_maka_meninjaitis&oldid=64927
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 13 Ọnwaìrinààbụọ 2019, mgbe 06:00